Su'aalaha iyo jawaabaha agagaarka COVID-19 ee luqadaha Afrikaanka ee gobolka - AfricArXiv
Published by Kooxda AfricanArXiv on 25th March 2020 25th March 2020
Faafinta macluumaadka ku saabsan waxqabadka ugu wanaagsan iyo talo soojeedinta habdhaqanka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus waxaa badanaa lagu bixiyaa Ingiriis. Qiyaastii 2000 oo luqadood oo maxalli ah ayaa looga hadlaa qaaradda Afrika dadkuna waxay xaq u leeyihiin in lagu wargeliyo luqadooda wixii ku saabsan iyo sida ay u ilaalin karaan naftooda, qoyskooda, asxaabtooda, iyo asxaabtooda.
Ma aragtay inaad bedeli karto luqadda websaydhka? Waqtigaan la joogo, waxaan ku bixinnaa tusmadayada luqadaha soo socda:
Fadlan ogow: Websaydhka 'AfricanArXiv' waxaa si toos ah u tarjumay GTranslate.io iyada oo loo marayo wp plugin oo Ingiriis ah lagana dhigo 19 luqadood. Tarjumadu way fiicantahay laakiin sifiican uma fiicna. Ma naga caawin kartaa wanaajinayaan qoraalada la tarjumay ee shabakadayada? Fadlan emayl ku soo dir gacansare@africarxiv.org. | Tilmaamaha: github.com/AfricArxiv/…/translations.md
Ka akhriso inbadan oo ku saabsan kala duwanaanta luqadeed ee isgaarsiinta aqoonyahan Afrikaanka ah africarxiv.org/languages/.
Fadlan ka hel macluumaadka hoose ee ay bixiso Xafiiska gobolka ee WHO ee Afrika // galaangal March 25, 2020:
WHO Su'aal iyo jawaabo ku saabsan coronaviruses (COVID-19)
Wadamada Afrika waxay ka gudbaan u diyaargarowga COVID-19 si looga jawaabo sida dad badani xaqiijiyeen kiisaska
Beesha caalamka ayaa ku tartameysa inay yareyso ugu dambeyntiina joojiso faafitaanka COVID-19, oo ah aafo faafisay kumanaan kun oo ruux iyo kumanaan kale oo xanuunsan. Afrika gudaheeda, fayrasku wuxuu ku fiday tobonaan waddan toddobaadyo gudahood. Dowladaha iyo maamulada caafimaadka ee qaarada oo dhan ayaa dadaal ugu jira sidii loo xadidi lahaa cudurada baahsan.
Tan iyo markii uu biloowday cudurka dillaaca cudurka adduunka (World Health Organisation) (WHO) wuxuu ka taageerayey dowladaha Afrika sidii ogaanshaha hore iyadoo la siinayo kumanaan xirmo oo ah noocyada tijaabada ah ee COVID-19 dalalka, tababaridda daraasiin shaqaale caafimaad ah iyo xoojinta la socoshada bulshada dhexdeeda. Afartan iyo toddoba dal oo ku yaal gobolka Afrika ee WHO ayaa hadda iska baari kara COVID-19. Bilowga dillaaca laba kaliya ayaa sidaas sameyn kara.
WHO ayaa soo saartay hagitaan dalalka, oo si joogto ah loo cusbooneysiyo si ay u tixgeliso xaaladda isbeddelka. Tilmaamaha waxaa ka mid ah tallaabooyinka sida karantiilnimada, dib u celinta muwaadiniinta iyo u diyaarsanaanta goobaha shaqada. Ururku wuxuu sidoo kale la shaqeynayaa shabakad khubaro ah si ay iskugu dubbaridaan dadaalada la socodka gobolka, cudurka faafa, sameynta, baarista, daaweynta iyo daaweynta, iyo qaabab kale oo lagu garto, loo maareeyo cudurka loona xaddido fiditaanka baahsan.
WHO waxay kaalmo fog ka siineysaa waddamada dhibaatadu ka soo gaartay adeegsiga aaladaha macluumaadka elektiroonigga ah, sidaa darteed mas'uuliyiinta caafimaadka qaranku waxay si fiican u fahmi karaan dillaaca dalalkooda. Diyaarsanaanta iyo wax ka qabashada cudurrada hore waxay siinayaan aasaas adag dalal badan oo Afrikaan ah si wax looga qabto fiditaanka COVID-19.
Muhiimad ahaan, tillaabooyinka ka hortagga aasaasiga ah ee shakhsiyaadka iyo bulshada ayaa ah aaladda ugu awoodda badan ee looga hortago fiditaanka COVID-19. WHO ayaa ka caawinaysa maamulada maxalliga ah inay farsameeyaan farriimaha raadiyaha iyo baraha telefishanka si ay dadweynaha ugu wargeliyaan halista COVID-19 iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado. Ururku wuxuu kaloo gacan ka geysanayaa ka hortagga kala-baxa isla markaana wuxuu waddammada ku hagayaa samaynta xarumaha wacitaanka si loo hubiyo in shacabka la wargeliyo.
Su'aalaha iyo jawaabaha ee coronaviruses (COVID-19)
>> yaa.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses // 9 Maarso 2020 | Su'aal iyo Jawaab
WHO waxay si joogto ah ula socotaa ugana jawaabaysaa dillaacan. Su'aalahan iyo jawaabahan waa la cusbooneysiin doonaa maadaama waxbadan laga ogyahay COVID-19, sida ay u faafto iyo sida ay u saameyso dadka adduunka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, si joogto ah dib ula soco Bogagga coronavirus ee WHO.
Coronaviruses waa qoys weyn oo fayras ah oo laga yaabo inay jirro u geystaan ​​xayawaanka ama aadanaha. Bini'aadamka, dhowr coronaviruses ayaa lagu yaqaanaa inay keenaan caabuqyada neef-mareenka oo u dhexeeya hargabka caadiga ah ilaa cudurro aad u daran sida Bariga Dhexe ee neefsashada (MERS) iyo Syndrome Ba'an oo Ba'an (SARS). Kii ugu dambeeyay ee la helay coronavirus wuxuu sababaa cudurka coronavirus COVID-19.
COVID-19 waa cudurka la is qaadsiiyo ee uu keeno coronavirus-kii dhowaan la helay. Fayraskan cusub iyo cudurkan lama yaqaan kahor intuusan fidin dillaacay Wuhan, Shiinaha, bishii Diseembar 2019.
Waa maxay calaamadaha COVID-19?
Calaamadaha ugu caansan ee COVID-19 waa qandho, daal, iyo qufac qallalan. Bukaanjiifka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yeeshaan xanuun iyo xanuun, sanka oo istaaga, sanka oo diif ah, cune xanuun ama shuban. Calaamadahani inta badan waa kuwo khafiif ah oo si tartiib tartiib ah u bilaabma. Dadka qaar baa cudurka qaada laakiin ma yeeshaan wax calaamado ah mana dareemaan caafimaad darro. Dadka intooda badan (qiyaastii 80%) way ka bogsadaan cudurka iyaga oo aan u baahnayn daaweyn gaar ah. Qiyaastii 1 ka mid ah 6dii qof ee qaada COVID-19 ayaa si xun u bukoodaa oo waxaa ku adkaata neefsashada. Dadka da'da ah, iyo kuwa leh dhibaatooyinka caafimaad ee hoose sida dhiig-karka, dhibaatooyinka wadnaha ama sokorowga, waxay u badan tahay inay qaadaan cudurro halis ah. Dadka qaba qandho, qufac iyo neefsashadu waa inay raadsadaan daryeel caafimaad.
Sidee ayuu COVID-19 u fidaa?
Dadku waxay ka qaadi karaan COVID-19 kuwa kale ee qaba fayras. Cudurku wuxuu ku faafikaraa qof ilaa qof ilaa dhibco yaryar sanka ama afka oo ku faafa marka qof qaba COVID-19 qufaco ama neefsato. Dhibcahan ayaa ku soo dhaca aaladda sheyga iyo dusha qofka. Dadka kale waxay markaa ku qabtaan COVID-19 adoo taabanaya walxahaas ama sagxadaha, ka dib markay taabtaan indhahooda, sankooda ama afkooda. Dadku sidoo kale way qaadi karaan COVID-19 haddii ay ku neefsadaan dhibco dhibic qof qaba COVID-19 oo qufacaya ama dhibcalaya dhibco. Tani waa sababta ay muhiimka u tahay in laga fogaado in ka badan 1 mitir (3 fuudh) qof jiran.
WHO ayaa qiimeyn ku sameyneysa baaris joogto ah oo ku saabsan dariiqooyinka COVID-19 loo faafiyo waxayna sii wadi doontaa wadaagida natiijooyinka la cusbooneysiiyay.
Fayraska keena COVID-19 ma lagu kala qaadi karaa hawada?
Daraasadaha ilaa hadda waxay soo jeedinayaan in fayraska sababa COVID-19 inta badan lagu kala qaado taabashada dhibcaha neefsashada halkii hawada lagu kala qaadi lahaa. Ka eeg jawaabtii hore "Sidee buu COVID-19 u faafo?"
CoVID-19 ma laga qaadi karaa qof aan lahayn astaamo?
Sida ugu badan ee cudurku u faafo waa iyada oo dhibco neef-mareen ah oo uu soo saaro qof qufacaya. Khatarta ah inuu COVID-19 ka qaado qof aan haba yaraatee wax calaamado ah lahayn aad bay u hoosaysaa. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo qaba COVID-19 waxay la kulmaan calaamado fudud oo keliya. Tani waxay si gaar ah run u tahay marxaladaha hore ee cudurka. Markaa waa suurtogal in laga qaado COVID-19 qof qaba, tusaale ahaan, qufac fudud oo aan dareemayn xanuun. WHO waxa ay qiimaynaysaa cilmi baadhisyo socda oo ku saabsan muddada gudbinta COVID-19 waxayna sii wadi doontaa in ay la wadaagto natiijooyinka la cusboonaysiiyay.
Ma ka qaadi karaa COVID-19 saxarada qof cudurka qaba?
Khatarta ah in COVID-19 laga qaado saxarada qofka cudurka qaba ayaa u muuqata mid hoose. Iyadoo baaritaanada ugu horreeya ay muujinayaan in fayrasku uu ku jiro saxarada xaaladaha qaarkood, faafitaanka dariiqan ma aha astaanta ugu weyn ee dillaaca. WHO waxa ay qiimaynaysaa cilmi baadhisyo socda oo ku saabsan siyaabaha COVID-19 uu u faafo waxayna sii wadi doontaa in ay la wadaagto natiijooyinka cusub. Sababtoo ah tani waa khatar, si kastaba ha ahaatee, waa sabab kale oo lagu nadiifiyo gacmaha si joogto ah, ka dib isticmaalka musqusha iyo ka hor inta aan la cunin.
Yaa halis ugu jira inuu ku dhaco jirro daran?
Iyadoo aan wali baraneyno sida COVID-2019 u saameeyo dadka, dadka da'da ah iyo dadka qaba xaalado caafimaad oo hore u jiray (sida dhiig karka, cudurada wadnaha, cudurada sambabada, kansarka ama sokorowga) waxay u muuqdaan inay yeeshaan cudur halis ah si ka badan kuwa kale.
Antibiyootiga waxtar ma u leeyihiin ka hortagga ama daawaynta COVID-19?
Maya. Antibiyootigyadu kama shaqeeyaan fayraska, kaliya waxay ka shaqeeyaan caabuqyada bakteeriyada. COVID-19 waxaa keena fayras, markaa antibiyootiga ma shaqeeyaan. Antibiyootiga waa inaan loo isticmaalin ka hortag ama daawaynta COVID-19. Waa in loo isticmaalo oo kaliya sida uu takhtarku faray si loogu daweeyo caabuqa bakteeriyada.
COVID-19 ma la mid yahay SARS?
Maya. Fayraska sababa COVID-19 iyo kii sababay dillaaca xanuunka daran ee neef-mareenka (SARS) ee 2003 waxay isku xidhan yihiin hidde ahaan, laakiin cudurrada ay keenaan aad ayay u kala duwan yihiin.
SARS aad ayuu u dilaa laakiin aad buu uga faafay COVID-19. Ma jiro wax cudur ah oo SARS ka dillaacay meel kasta oo adduunka ah tan iyo 2003dii.
Maxaan samayn karaa si aan isu ilaaliyo oo aan uga hortago faafitaanka cudurka?
Tallaabooyinka ilaalinta qof walba
La soco macluumaadka ugu dambeeyay ee COVID-19 dillaacay, oo laga heli karo mareegaha WHO iyo iyada oo loo sii marayo maamulka caafimaadka dadweynaha ee qaranka iyo degaankaaga. Wadamo badan oo adduunka ah ayaa lagu arkay kiisas COVID-19 dhowr kalena waxaa lagu arkay cudurro dillaacay. Maamulka Shiinaha iyo qaar ka mid ah wadamada kale ayaa ku guuleystay inay hakiyaan ama joojiyaan faafitaankooda. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu waa mid aan la saadaalin karin si joogto ah si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay.
Waxaad yareyn kartaa fursadahaaga inaad ku qaaddo ama aad ku faafto COVID-19 adigoo qaadaya taxaddarro fudud:
Si joogto ah oo si fiican ugu nadiifi gacmahaaga gacmo alkohol ku salaysan ama ku maydh saabuun iyo biyo.
Waa maxay sababtu? Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ama isticmaalida xoqitaanka alkohol-ku-salaysan waxay dishaa fayrasyada laga yaabo inay gacmahaaga ku jiraan.
Joog ugu yaraan 1 mitir (3 fuudh) masaafada u dhaxaysa naftaada iyo qof kasta oo qufacaya ama hindhisayo.
Waa maxay sababtu? Marka qof qufaco ama hindhiso waxay ku buufiyaan dhibco yar yar oo dareere ah sanka ama afka kuwaas oo laga yaabo inay ku jiraan fayras. Haddii aad aad ugu dhowdahay, waxaad neefsan kartaa dhibcaha dhibcaha, oo uu ku jiro fayraska COVID-19 haddii qofka qufacaya uu qabo cudurka.
Ka fogow taabashada indhaha, sanka iyo afka.
Waa maxay sababtu? Gacmaha waxay taabtaan meelo badan waxayna qaadi karaan fayrasyo. Marka ay wasakhoobaan, gacmuhu waxay u gudbin karaan fayraska indhahaaga, sankaaga ama afkaaga. Halkaas ayuu fayrasku ka geli karaa jidhkaaga oo ku bukoon karaa.
Hubso in adiga, iyo dadka kugu xeeranba aad raacdaan nadaafad neefsashada wanaagsan. Tan macnaheedu waa inaad ku daboosho afkaaga iyo sankaaga xusulkaaga xuubkaaga ama unugyadaada markaad qufacayso ama hindhiseyso. Kadib tuur unugyada aad isticmaashay isla markiiba.
Waa maxay sababtu? Dhibco ayaa faafiya fayraska. Markaad raacdo nadaafadda neefsashada ee wanaagsan waxaad dadka kugu xeeran ka ilaalinaysaa fayrasyada sida hargabka, ifilada iyo COVID-19.
Waa maxay sababtu? Maamulka heer qaran iyo heer deegaan ayaa heli doona xogta ugu cusub ee xaalada deegaankaaga. Soo wacitaanka hore waxay u oggolaan doontaa bixiyaha xanaanada caafimaadka inuu si dhakhso ah kuugu hago xarunta caafimaadka saxda ah. Tani waxay sidoo kale kaa ilaalin doontaa waxayna kaa caawin doontaa inaad ka hortagto faafitaanka fayraska iyo caabuqyada kale.
Kala soco wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 goobihii ugu dambeeyay (magaalooyinka ama meelaha maxalliga ah ee uu COVID-19 si weyn ugu faafo). Haddii ay suurtagal tahay, iska ilaali inaad u safarto meelaha - gaar ahaan haddii aad tahay qof da' weyn ama aad qabto cudurka macaanka, wadnaha ama sambabada.
Waa maxay sababtu? Waxaad haysataa fursad sare oo aad ku qaadi karto COVID-19 mid ka mid ah meelahan.
Tallaabooyinka ilaalinta dadka ku sugan ama dhawaan booqday (14 maalmood ee la soo dhaafay) meelaha uu COVID-19 ku faafo
Raac tilmaanta kor lagu sheegay (tallaabooyinka ilaalinta qof walba)
Is-karantiil adiga oo guriga jooga haddii aad bilowdo inaad dareento caafimaad darro, xataa adigoo leh astaamo fudud sida madax-xanuun, qandho hoose (37.3 C ama ka badan) iyo diif yar, ilaa aad ka bogsato. Haddii ay lama huraan kuu tahay in qof kuu keeno sahay ama aad dibadda u baxdo, tusaale si aad cunto u soo iibsato, dabadeed xidho maaskaro si aad uga fogaato in aad dadka kale qaadsiiso.
Waa maxay sababtu? Ka fogaanshaha xiriirka dadka kale iyo booqashada xarumaha caafimaadka waxay u oggolaan doontaa xarumahan inay si hufan u shaqeeyaan oo ay kaa caawiyaan adiga iyo kuwa kaleba inay ka badbaadiyaan COVID-19 iyo fayrasyada kale ee suurtagalka ah.
Haddii aad yeelato qandho, qufac iyo neefsashada oo kugu adkaata, u raadi talo caafimaad isla markiiba sababtoo ah tani waxaa sabab u ah caabuqa neef-mareenka ama xaalad kale oo halis ah. Horay u wac oo u sheeg adeeg bixiyahaaga safar kasta ama xidhiidh kasta oo dhawaanahan la sameeyay dadka safarka ah.
Waa maxay sababtu? Soo wacitaanka hore waxay u oggolaan doontaa bixiyaha xanaanada caafimaadka inuu si dhakhso ah kuugu hago xarunta caafimaadka saxda ah. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa ka hortagga faafitaanka suurtagalka ah ee COVID-19 iyo fayrasyada kale.
Sidee ugu badan tahay inaan qaado COVID-19?
Khatartu waxay ku xiran tahay meesha aad joogto - iyo si gaar ah, haddii uu jiro COVID-19 ka dillaacay halkaas.
Dadka intooda badan ee ku nool inta badan goobaha halista ah ee lagu qaadi karo COVID-19 ayaa weli hooseysa. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxaa jira meelo adduunka oo dhan ah (magaalo ama goobo) oo uu cudurku ku fido. Dadka ku nool, ama booqanaya, meelahan khatarta ah in la qaado COVID-19 aad ayay u badan tahay. Dawladaha iyo maamulka caafimaadka ayaa qaadaya tallaabo adag mar kasta oo kiis cusub oo COVID-19 ah la ogaado. Hubi inaad u hoggaansanto xannibaadaha maxalliga ah ee safarka, dhaqdhaqaaqa ama shirarka waaweyn. La shaqaynta dadaallada xakamaynta cudurrada waxay yarayn doontaa halista aad ku qaadayso ama faafin COVID-19.
Faafida COVID-19 waa la xakameyn karaa waana la joojin karaa gudbinta, sida lagu muujiyey Shiinaha iyo qaar ka mid ah waddamada kale. Nasiib darro, cudurro cusub ayaa si degdeg ah u soo bixi kara. Waa muhiim inaad ka warqabto xaalada meesha aad joogto ama aad damacsan tahay inaad tagto. WHO waxay maalin walba daabacdaa warar cusub oo ku saabsan xaaladda COVID-19 adduunka oo dhan.
Waxaad kuwan ku arki kartaa who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/xaaladaha-warbixinaha/
Intee in le'eg ayuu soconayaa mudada lagu soo darayo COVID-19?
"Xilliga ka-soo-baxa" macnaheedu waa wakhtiga u dhexeeya qabashada fayraska iyo bilawga calaamadaha cudurka. Inta badan qiyaasaha xilliga soo-baxa ee COVID-19 waxay u dhexeeyaan 1-14 maalmood, inta badanna ku dhawaad ​​​​XNUMX maalmood. Qiyaasahan waa la cusboonaysiin doonaa marka xog badan la helo.
Ma ka qaadi karaa COVID-19 xayawaankayga?
In kasta oo ay jirtay hal tusaale oo ah eey uu ku haleelay Hong Kong, ilaa maanta, ma jirto caddayn muujinaysa in eey, bisad ama xayawaan kasta uu gudbin karo COVID-19. COVID-19 waxaa inta badan lagu kala qaadaa dhibco soo saara marka qof cudurka qaba uu qufaco, hindhiso, ama hadlo. Si aad naftaada u ilaaliso, gacmahaaga si joogto ah oo taxadar leh u nadiifi.
WHO waxa ay sii waddaa in ay la socoto cilmi-baadhistii ugu dambaysay ee arrintan iyo mawduucyada kale ee COVID-19 oo ay cusbooneysiin doonto marka natiijooyin cusub la helo.
Ammaan ma tahay in xidhmo laga helo meel kasta oo COVID-19 laga soo sheegay?
Haa. Suurtagalnimada in qof cudurka qaba sumoobaya alaabada ganacsiga ayaa yaryahay isla markaana halista ah inuu ku dhaco fayraska keena COVID-19 xirmo la dhaqaajiyay, safray, oo la soo gaadhsiiyay xaalado kala duwan iyo heerkulku wuu hooseeyaa.
Miyaan ka walwalaa COVID-19?
Jirrada uu keeno caabuqa COVID-19 guud ahaan waa mid fudud, gaar ahaan carruurta iyo dadka waaweyn. Si kastaba ha ahaatee, waxay keeni kartaa jirro halis ah: qiyaastii 1 ka mid ah 5tii qof ee uu ku dhaco waxay u baahan yihiin daryeel isbitaal. Sidaa darteed waa wax iska caadi ah in dadku ay ka walwalaan sida uu faafitaanka COVID-19 u saameyn doono iyaga iyo kuwa ay jecel yihiin.
Waxaan welwelkayaga u gudbin karnaa ficillo aan ku ilaalinno nafteena, kuwa aan jecelnahay iyo bulshadayada. Ugu horrayn waxaa ka mid ah ficilladan si joogto ah oo dhammaystiran oo gacmaha loo dhaqo iyo nadaafadda neefsashada oo wanaagsan. Marka labaad, la soco oo raac talada maamulka caafimaadka deegaanka oo ay ku jiraan wixii xannibaado ah ee lagu soo rogay safarka, dhaqdhaqaaqa iyo isu imaatinka. Wax badan ka baro sida aad naftaada u ilaalin lahayd who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/talo-bixinta-dadweynaha
Ma jiraan dawooyin ama daawayn ka hortagi kara ama daweyn kara COVID-19?
Iyadoo qaar ka mid ah dawooyinka reer galbeedka, kuwa dhaqameed ama guriga laga yaabo inay bixiyaan raaxaysi oo ay yareeyaan calaamadaha COVID-19, ma jirto wax caddaynaya in daawada hadda jirta ay ka hortagi karto ama daweyn karto cudurka. WHO kuma taliso in is-daawadu ay iska bixiso wax dawooyin ah, oo ay ku jiraan antibiyootiga, si looga hortago ama loo daweeyo COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, waxa jira dhawr tijaabo oo caafimaad oo socda kuwaas oo ay ku jiraan dawooyinka reer galbeedka iyo kuwa dhaqameedba. WHO waxay sii wadi doontaa inay bixiso macluumaadka cusub isla marka natiijooyinka caafimaad la helo.
Ma jiraa tallaal, daawo ama daawaynta COVID-19?
Wali maaha. Ilaa hadda, ma jiro talaal iyo dawo gaar ah oo ka hortagga fayraska si looga hortago ama loo daweeyo COVID-2019. Si kastaba ha ahaatee, kuwa ay saameeyeen waa in ay helaan daryeel si loo yareeyo calaamadaha. Dadka xanuunka daran qaba waa in isbitaal la seexiyaa. Bukaanjiifka badankoodu way bogsadaan iyadoo ay ugu wacan tahay daryeelka taageerada ah.
Tallaalada suurtagalka ah iyo daawaynta mukhaadaraadka qaarkood ayaa baaritaan ku socda. Waxa lagu tijaabiyaa tijaabooyin caafimaad. WHO waxa ay isku dubariday dadaallada lagu horumarinayo tallaallada iyo dawooyinka si looga hortago loogana daweeyo COVID-19.
Siyaabaha ugu waxtarka badan ee aad naftaada iyo kuwa kaleba uga ilaalin karto COVID-19 waa inaad si joogto ah u nadiifiso gacmahaaga, ku dabool qufaca laabashada suxulka ama nudaha, oo aad ka fogaato ugu yaraan 1 mitir (3 cagood) dadka qufacaya ama hindhisada. (Eeg Tallaabooyinka ilaalinta aasaasiga ah ee ka hortagga coronavirus-ka cusub).
Miyaan xidhaa maaskaro si aan isu ilaaliyo?
Kaliya xidho maaskaro haddii aad la xanuunsan tahay calaamadaha COVID-19 (gaar ahaan qufac) ama aad daryeesho qof laga yaabo inuu qabo COVID-19. Maaskarada wejiga ee la tuuri karo waxa la isticmaali karaa hal mar oo keliya. Haddii aadan xanuunsanayn ama aanad daryeelin qof buka markaa waxaad dhuminaysaa maaskaro. Adduunka oo dhan waxaa ka jira gabaabsi, marka WHO waxay ku boorinaysaa dadka inay si caqli gal ah u isticmaalaan waji-xidhka.
WHO waxay ku talisaa isticmaalka macquulka ah ee waji-xidhka caafimaadka si looga fogaado luminta agabka qaaliga ah ee aan loo baahnayn iyo isticmaalka khaldan ee waji-xidhkaeeg talo ku saabsan isticmaalka waji-xidhka).
Siyaabaha ugu waxtarka badan ee aad naftaada iyo dadka kaleba uga ilaalin karto COVID-19 waa in aad si joogto ah u nadiifiso gacmahaaga, ku dabool qufaca laabta suxulka ama nudaha oo aad ka fogaato ugu yaraan 1 mitir (3 cagood) dadka qufacaya ama hindhisaya. . Bal eeg Tallaabooyinka ilaalinta aasaasiga ah ee ka hortagga coronavirus-ka cusub Wixii macluumaad dheeraad ah.
Sida loo gashado, loo isticmaalo, loo bixiyo oo loo tuuro maaskaro?
Xusuusnow, maaskarada waa inay isticmaalaan oo keliya shaqaalaha caafimaadka, daryeelayaasha, iyo shakhsiyaadka leh calaamadaha neefsashada, sida qandho iyo qufac.
Kahor intaadan taaban maaskarada, gacmaha ku nadiifi gacanta xoqin alkohol ah ama saabuun iyo biyo
Qaado maaskarada oo ka eeg ilmada ama godadka.
Orient oo ah dhinaca sare (halka ay birtu ku taal).
Hubi in dhinaca saxda ah ee maaskaro uu u jeedo dibadda (dhanka midabka leh).
Maaskarada saar wejigaaga. Ku dheji fiilada birta ah ama cidhif adag ee maaskarada si ay u qaabayso qaabka sankaaga.
Hoos u soo jiid maaskarada hoose si ay u daboosho afkaaga iyo gadhkaaga.
Isticmaalka ka dib, iska saar maaskarada; ka saar wareegyada balaastikada ah ee dhegaha gadaashiisa adigoo maaskarada ka fogeynaya wejigaaga iyo dharkaaga, si aad uga fogaato taabashada meelaha wasakhaysan ee maaskarada.
Ku tuur maaskarada qashin xiran isla markiiba ka dib markaad isticmaasho.
Samee nadaafadda gacmaha ka dib markaad taabato ama iska tuurto maaskarada - Isticmaal gacmo xoqid alkohol ah ama, haddii ay muuqato wasakh, gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo.
Dadku ma ku qaadi karaan COVID-19 il xayawaan?
Coronaviruses waa qoys weyn oo fayras ah oo ku badan xayawaanka. Mararka qaarkood, dadku waxay qaadaan fayrasyadan kuwaas oo laga yaabo inay ku faafaan dadka kale. Tusaale ahaan, SARS-CoV waxa lala xidhiidhiyay bisadaha civet-ka iyo MERS-CoV waxa kala qaada geela dhogorta leh. Ilaha suurtagalka ah ee xoolaha ee COVID-19 weli lama xaqiijin.
Si aad naftaada u ilaaliso, sida marka aad booqanayso suuqyada xoolaha nool, iska ilaali inaad si toos ah ula xidhiidho xoolaha iyo sagxadaha oogada xoolaha. Hubi dhaqamada badbaadada cuntada ee wanaagsan mar walba. Si taxadar leh ula dhaqan hilibka ceyriin, caanaha ama xubnaha xoolaha si aad uga fogaato wasakheynta cuntooyinka aan la karin kana fogow cunista xoolaha cayriin ama aan la karin.
Intee in le'eg ayuu fayrasku ku noolaan karaa oogada?
Lama hubo ilaa inta uu fayraska sababa COVID-19 uu ku noolaanayo dusha sare, laakiin waxa ay u muuqataa in uu u dhaqmo sida coronaviruses kale. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in coronaviruses (oo ay ku jiraan macluumaadka hordhaca ah ee fayraska COVID-19) laga yaabo inay ku sii jiraan dusha sare dhowr saacadood ama ilaa dhowr maalmood. Tani waxay ku kala duwanaan kartaa xaalado kala duwan (tusaale nooca dusha sare, heerkulka ama qoyaanka deegaanka).
Haddii aad u malaynayso in dusha sare laga yaabo in cudurku ku dhaco, ku nadiifi jeermis-dile fudud si aad u disho fayraska una ilaaliso naftaada iyo dadka kaleba. Gacmahaaga ku nadiifi gacmeed alkohol ku salaysan ama ku maydh saabuun iyo biyo. Ka fogow taabashada indhahaaga, afkaaga, ama sankaaga.
Ma jiraan wax aanan samaynayn?
Tallaabooyinka soo socda MA AHA wax ku ool ah oo ka soo horjeedda COVID-2019 waxayna noqon kartaa waxyeello:
Xirashada maaskaro badan
Qaadashada antibiyootiga (fiiri su'aasha 10 "Ma jiraan dawooyin daweyn ah oo ka hortagi kara ama daweyn kara COVID-19?")
Si kasta ha noqotee, haddii aad qandho leedahay, qufac iyo neefsashada oo kugu adkaada hore u raadso daryeel caafimaad si loo yareeyo halista qaadista infakshan aad u ba'an oo la hubiyo inaad la wadaagto taariikhda safarkaagii ugu dambeeyay bixiyahaaga daryeelka caafimaad.
Waan isticmaalayaa #AI in lagu turjumo "Gacmahaaga dhaq" in ka badan 500 oo luqadood. Waa tan sida aan ku sameeyay oo ay weheliso xiriirin tarjumaadaha: https://t.co/jkXc0ErYOc
Thanks to @facebookai shaqadooda MUSE, taas oo fure u ahayd in tan la gaaro!#NLProc #Fayruuska corona @SILintl pic.twitter.com/3zJrvST3Jc
Categories:	Covid-19Kala Duwanaanta LuqaddaFuran FuranIsgaarsiinta Sayniska